Holmes ရွှေ Femman အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် 2013 | Holmbygden.se
Holmes ရွှေ Femman အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် 2013
အပေါ် Posted 24 ဇန္နဝါရီလ, 2013 အားဖြင့် Holmbygden.se
အဘယ်သူသည် Holmes SK ကိုအကောင်းဆုံးသိတယ်?! Olle Frisk အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအ HSK ပရိတ်သတ်များကိုစိန်ခေါ်မယ်! ပျော်စရာလမ်းအတွက်အသင်းအဖွဲ့ supporting. ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူနှင့်သင့်အပေါ်အလောင်းအစား “Guldfemma” တစ်ဦးကအလွှာ ur. အကောင်းဆုံး Holmes ကျွမ်းကျင်သူအင်္ဂလန်မှတစ်ဦးဘောလုံးခရီးစဉ်အနိုင်ရ, အဘိုး 4000 Kr!!
ဒီမှာ သင်သည်သင်၏ငါးခု Holmes MVP အပေါ်အွန်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်! (သငျသညျစက္ကူပုံစံအတွက်လက်ကမ်းစာစောင်ရှိသည် Do? ထိုခဏခြင်းတွင်ထိုသူတို့အား / စာသားသည်သင်၏နံပါတ်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မခေါ်ခွင့်ပြုပါရန်ပထမဦးဆုံးအသင်းကစားသမားများရန်သင့်ပဉ္စမစွန့်ခွာ 0730-332944.)
အသစ်စက်စက်က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်, guldfemman.se/holms-sk သင်သည်လည်းရေသွန်နိုင်ပါလိမ့်မည်, သင့်ရဲ့ကစားသမားကိုလိုကျနာ, မဆိုပြုမည်. နည်းဗျူဟာအစားထိုးအမ် M နှင့်ကြွလာအတိုင်းလိုက်နာရွှေငါးသင်ဘယ်လိုကြည့်ပါ.
ရာသီ 2013 ကျနော်တို့ထို့နောက်ဟုခေါ်သောအရာ၌ဖြစ်လိမ့်မည် “ရွှေ Femman - သင်၏ဒေသခံအိပ်မက်အဖွဲ့“. ဤသည် Aftonbladet အယူအဆအိပ်မက် Elvan ဆင်တူသည်, ဒါပေမယ့်ဒေသခံဇာတ်ကောင်. အစား “မဝယ်” 11 Allsvenskan ထံမှကစားသမား, ဖောက်သည်ရွေးချယ်5ကျွန်တော်တို့ရဲ့ A-Team ကနေ Player ကို. အဘယ်သူမျှမအိပ်မက်တကျိပ်တပါးသောစကားများ, တဦးတည်း guldfemma utan.
ပထမဦးဆုံးအသင်း၏ကစားသမားလိဂ်မှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်မှတ်ရလိမ့်မယ်. en ger t.ex ကူညီ. အနီရောင်ကဒ်ဖြတ်တောက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေချိန်မှာထောက်ပြ. ဤအပြေးပြိုင်ပွဲ၌နေသောကိုရွှေငါးပရိသတ်တွေဖို့အလှည့်အချက်များအတွက်. လက်ရှိအနေအထားအဆက်မပြတ်ကြောင်း Holmes SK ကိုရွှေ Femman များအတွက်အထူး website တွင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရဦးမည် (reserved). အဘယ်သူ၏ပဉ္စမအများဆုံးရမှတ်စီးရီးကျော်အခါ Holmes ရဲ့အကောင်းဆုံး tipster အင်္ဂလန်မှတစ်ဦးဘောလုံးခရီးစဉ်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်, အဘိုး4000 Kr. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမဟုတ်ရင်တောင် “gamblare” နေ့စဉ်, က Holmes အတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်ကဏ္ဍကိုထောက်ပံ့မယ့်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးနှင့်အတူအခမဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် အခမဲ့ SMS ကိုresultattjänst, ဒါကြောင့်သင်စဉ်ဆက်မပြတ်ရလဒ်များကိုရရှိရန်နှင့်အချက်အလက်ကိုက်ညီ.
မတ်လ / ဧပြီလကသူတို့ကိုရွှေငါးကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့အသင်းအတွက်ငါတို့သည်လည်းဒီသုံးပြီးပုံနှိပ်ရောင်းအားစာရွက်များမြှင့်တင်နေပါတယ်. အကျိုးစီးပွားအထက်တွင်မှတ်ပုံတင်မယ်, အချိန်ကိုကြွလာသောအခါပိုမိုသောအချက်အလက်များအရ. ဒါဟာမဆိုလမ်းအတွက် binding မဟုတ်ပါ. အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျနော်တို့ကဒီမှာရွှေပဉ္စမတန်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ site သို့လင့်ထားသည်ပါလိမ့်မယ်. အကြားတစ်ဦးကပဉ္စမရွှေကိုကုန်ကျစရိတ် 50 €နှင့် 250 ကိုဝယ်ခြင်းငှါအရာကစားသမားပေါ်မူတည် SEK.
ရွှေ Femman Holmes Sportklubb အသစ်ဝင်ငွေဖန်တီးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်, ထိုမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကျနော်တို့ကအသင်းအဖွဲ့န်းကျင်အကျိုးစီးပွားနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတိုးမြှင်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒီအပေါ်ပြောပြရန်ကိုကူညီပါ. ကိုအသုံးပြုဖို့ ကျေးဇူးပြု. “ကဲ့သို့” နှင့် “ဝေစု”-လင့်များနှင့်ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများဖို့စကားလုံးပျံ့နှံ့ကူညီ.
ရွှေ Femman အကြောင်းပိုမို Read, သွင်းယူမှုစနစ်, စျေးနှုန်းများ, M.W.. အပေါ် guldfemman.se/info.
Holmes SK ကိုအကြောင်းပိုမို Read.